Foto agbamakwụkwọ na ụlọ ahịa Apple! | Esi m mac
Nke a bụ ihe otu di na nwunye na-ahụkwa n'anya na ngwaahịa Apple mere na Singapore. Na nke a ọ bụ Jermyn Wee na Chia Suat, ndị doro anya na Fans nke ika na Apple na ngwaahịa ke ofụri ofụri. Akụkọ a chọrọ ịmata ihe na eziokwu anaghị ama banyere ụdị ikpe ahụ sitere na ụlọ ahịa ndị ọzọ ebe ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ na-eme nnọkọ foto nke agbamakwụkwọ ha n'otu n'ime ụlọ ahịa ụmụ nwoke Cupertino. O nwere ike ịbụ na n'oge ụfọdụ nke a mere mana anyị ahụghị otu akụkọ na netwọkụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ma ọ bụ mara otu okwu, hapụ ya na nkwupụta.
Ọbụna enwere vidiyo weghaara site na mgbe di na nwunye di na nwunye nwere obi uto na-agbada ala nke ụlọ ahịa ahụ iji mee ka ha ghara ịnwụ anwụ tupu oge ịkụ aka na ọ ofụ nke ndị ọrụ na ndị ọrụ ụlọ ahịa ahụ. Vidio a dị na weebụsaịtị nke Cult of Mac ma anyị enwebeghị ike ịtinye ya na weebụ.
Hụ di na nwunye ahụ na-ese foto ndị a na ụlọ ahịa Apple anaghị akwụsị ịtụnanya, mana enweghị obi abụọ ọ bụ ihe onwe na nkwekọrịta nkwekọrịta, yabụ ọ bụrụ na ha nwere obi ụtọ na nnọkọ foto a n'etiti Macs, iPhones, iPads, wdg Ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-egbochi gị ịme ya, ha ga-ajụkwa ndị isi ụlọ ahịa maka ikike ka ha buru ụzọ mee nnọkọ ahụ wee gaa n'ihu ya na ... Ogologo ndụ na nwunye na nwunye!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Foto agbamakwụkwọ na ụlọ ahịa Apple!